Train Travel Germany Archives | စာမျက်နှာ2၏9| တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားဂျာမနီ
အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်များ, စပျစ်ဥယျာဉ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများ, အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အတွက်ဥရောပကိုစုံလင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအရာအနည်းငယ်သာရှိသည်. ဥရောပမြို့တိုင်းတွင်ကျက်သရေရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါတို့၏ ဦး တည်ရာ 10 ဥရောပ၏စာရင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်အလှဆုံးသောနေရာများအနည်းငယ်ဖြစ်ကြသည်. ဥရောပ…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...
ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းသည်ခမ်းနားထည်ဝါသောနန်းတော်များသို့ပြန်လာခဲ့သည်, သစ်တောများ, နှင့်အလှဆုံးသဘာဝနှင့်ရေတံခွန်များ. သင်အီတလီသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့ခရီးသွားနေကြသည်ဖြစ်စေမ, စီစဉ်သည်2လကြာယူရိုခရီးစဉ်, သို့မဟုတ်ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်သာတစ်ပတ်သာရှိသည်,…
ရထားခရီးသွားခြင်းသည်ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်း၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာအချို့သည်ဥရောပနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှိသည်, ကမ္ဘာပေါ်မှာ. အထွတ်အထိပ်နာရီမှာလူစည်ကားခံရနေသော်လည်း, ထိပ်5ဥရောပရှိအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာများမှာ…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
သငျသညျအစဉျအမွဲကပြူးကြည့်တူခံစားရသောအရာကိုအံ့ဩကြပါပြီ, ကျယ်ပြန့်မျက်လုံးများနှင့်, အားဖြင့်လောကဓာတ်လေပြင်းအဖြစ်ကြီးမားသောရုပ်ပုံပြတင်းပေါက်ကို? ဘယ်လိုဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုဆင်း trundles အဖြစ်ရထားများ၏တည်ငြိမ်လှုခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှ lulled ခံအကြောင်းကို? ရထားခရီးသွားခြင်းသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ...
ဥရောပပြင်ပကဒီမှာ? သငျသညျသကဲ့သို့ငါနံနက်အဖြစ်အများသုံးအားဖြင့်တျရှုပျထှေးနေလျှင်သင်၏လက်ကိုမြှင့်. သေချာတာပေါ့, နယူးယောက်မှာမြေအောက်ရထားရှိတယ်, နှင့်တိုရွန်တိုမက်ထရိုပြေး, ဒါပေမယ့်အားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတဲ့, ကမ္ဘာကြီးသည်ကားများပေါ်တွင်ရှင်သန်ကြီးထွားလာသည်. ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်နေတာကိုတွေ့သောအခါ…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ...
နယ်လှည့်အဆုံးစွန်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်သင်ကလုပျသငျ့အိတ်အခမဲ့, အထူးသဖြင့် layovers ဘို့ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံဂျာမဏီရဲ့လူကြိုက်များမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းအတွက်အခမဲ့တစ်ရက်ရှိပါက. ကျနော်တို့သုံးဘို့သင့်ကိုဂျာမနီရှိလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာများအတွက်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုရှိ…
တစ်ဦးက quintessential ခရီးသွားခရီးရထားဥရောပခရီးရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းတို့သည်ဦးစားပေး Eco-friendly ခရီးသွားနည်းလမ်းဖြစ်လာ. ခရီးသွား, အနှစ်သာရအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးမသာ. စိန့်စဉ်းစားကြည့်ပါ. သြဂတ်ရဲ့တီထွင်ခဲ့တယ်စကားလုံးများကို, "ဒီကမ္ဘာကြီးဟာစာအုပ်ဖြစ်ပြီးသူတို့အား…
အချိန်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီ – သင်ရုံတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးပြီရှိမရှိ, သင့်ရဲ့နှစ်စဉ်အားလပ်ရက်ထွက်သည်ဦးတည်နေကြတယ်, သို့မဟုတ်မြေယာခရီးသွား၏သှေးဆောငျလွဲချော်မရနိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, သငျသညျရထားခရီးသွားဥရောပရွေးချယ်ပါတယ်. ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်အယူအဆင်, အားဖြင့်ခရီးထွက်မယ့်ခရီး…
အမ်စတာဒမ်အလည်အပတ်ခရီးတစ်ခုခမ်းနားသောမြို့ဖြစ်၏. သငျသညျဖြစ်ကောင်းပျင်းရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုမြင်ကဒီမှာလုပ်ဖို့သိပ်ရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, ကတုန်းပဲအမှုအရာထရောမွှေဖို့အကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်. That is because Amsterdam isagreat starting point for several amazing…